Varavarana Misokatra tao Amin’ny Betelan’i Alemaina
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Catalan Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kabyle Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Krio Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mingrelian Nahuatl (Afovoany) Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Oromo Ourdou Ouzbek Pendjabi Persianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tajiki Tarasque Tigrigna Tiorka Tlapanèque Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Umbundu Valencienne Xhosa Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal
Varavarana Misokatra tao Steinfels
Manana biraon’ny sampana 15 mpanao pirinty ny Vavolombelon’i Jehovah, ary mizarazara any amin’ny faritra maro eran-tany izany. Any Eoropa Afovoany ny anankiray, izany hoe ao Steinfels, any Alemaina.
Nanao varavarana misokatra ny biraon’ny sampan’i Eoropa Afovoany tamin’ny 23-25 Mey 2014, ary nasaina ho tonga tamin’izany ny olona teny amin’ny manodidina sy ny mpandraharaha ary ny manam-pahefana. Nampitondraina ny foto-kevitra hoe “30 Taona tao Selters” ilay fotoan-dehibe. Tamin’ny 21 Aprily 1984 mantsy no notokanana io sampana io.
Olona 3 000 mahery no namaly ny antso. Hoy ny ben’ny tanàna, izay efa niasa tao amin’ny kaominina nandritra ny 30 taona latsaka kely: “Andro iray toa zato foana izany mitsidika ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah izany.” Hoy ihany izy: “Tena vetivety no nahavitan’ity biraon’ny sampana eto Steinfels ity, satria natomboka tamin’ny 1979 dia vita tamin’ny 1984. Mbola variana foana aho hatramin’izao mieritreritra an’izany.”
Zava-nisongadina tamin’ilay fandaharana
Nahitana fampirantiana ho an’ny besinimaro tao. Anisan’izany ilay nitondra ny lohateny hoe: “Ny Vahoakan’i Jehovah Teto Eoropa Afovoany.” Efa 120 taona teo ho eo izay no nisy Vavolombelona tany amin’iny faritra iny, ary nisy tabilao nampiseho ny tantaran’izy ireo tao. Mbola aseho ao amin’ilay biraon’ny sampana io tabilao io hatramin’izao.
Ny fampirantiana iray indray nampiseho an’ireo Baiboly tsy fahita firy nefa miavaka. Anisan’izany ilay Baiboly manontolo amin’ny teny alemà, izay natonta tamin’ny 1534. Tao koa ny ampahan’ilay Baiboly nadikan’i Elias Hutter. Baiboly amin’ny fiteny 12 izy io, ary natonta tamin’ny 1599. Nisy tabilao sy sary ary fampisehoana video koa tao, mba hampisehoana amin’ny olona fa mbola mahasoa antsika hatramin’izao ny toro lalan’ny Baiboly.
Afaka nitsidika samirery an’ilay toerana koa ny mpitsidika. Nizara roa ilay fitsidihana. “Ny Fomba Fiainanay” no foto-kevitry ny fizarana voalohany. Hitan’ireo mpitsidika tamin’izany ny zavatra fanaon’ireo lehilahy sy vehivavy 1 000 mahery, izay mipetraka sy miasa ao amin’io biraon’ny sampana io. Azon’izy ireo natao ny nijery ny efitrano sasany tao amin’ireo trano fonenana. Nisakafo tao amin’ny efitra fisakafoana koa izy ireo, ary nandehandeha eran’ilay faritra. Hoy ny mpitsidika iray: “Tena tsara izany raha toerana!”
“Zavatra Vokarina” kosa no foto-kevitry ny fizarana faharoa tamin’ilay fitsidihana. Afaka nijery ny toerana fanontam-pirinty sy fanakambanam-boky ary fandefasana entana ireo mpitsidika. Hitany tamin’izany ny fanaovana pirinty sy ny fanakambanana ary ny fandefasana an’ireo boky ara-baiboly any amin’ny tany 50 mahery. Hoy ny lehilahy iray: “Tsy noeritreretiko mihitsy hoe miasa any amin’ny tany maro be ny Vavolombelon’i Jehovah. Tonga hatrany amin’ny faran’ny tany mihitsy ny bokin-dry zareo. Sady amin’izay indray mpiasa an-tsitrapo no manao an’ilay izy. Tena fahagagana izany.”
Lasa hain’ireo mpitsidika tsara ny jw.org
Anisan’ny niavaka koa ny tranoheva jw.org, izay nampiseho ny tranonkala ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Afaka nahita fanazavana sy video ny antitra sy ny tanora, ary voavaly daholo ny fanontaniana napetrak’izy ireo.
Lasa nahalala tsara kokoa ny asa ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany ireo mpitsidika. Maro no nankasitraka ny asantsika, ary miramirana erỳ rehefa vita ilay fitsidihana. Hoy ny lehilahy iray: “Nanana hevi-diso be dia be momba ny Vavolombelona aho, taloha. Mila mandinika indray an’ireny hevitra ireny aho fa hoatran’ny tsy mitombina ilay izy.” Niteny foana ny vehivavy iray hoe: “Rava daholo ny fitsarana an-tendrony androany.”
ANTONTAN’ISA MOMBA NY ZAVATRA VOKARINA
Tontaliny nanomboka tamin’ny 1984 ka hatramin’ny 2014
Gazety: 3 800 tapitrisa
Boky: 345 tapitrisa
Bokikely: 318 tapitrisa
Tany anaovana pirinty: 51
Tontaliny isam-bolana: 14 tapitrisa
Tany anaovana pirinty: 78
Andefasana entana *
Fiangonana: 16 624
Vavolombelon’i Jehovah: 1 270 130
^ feh. 17 Antontan’isa tamin’ny 2014
^ feh. 21 Antontan’isa tamin’ny 2014
^ feh. 24 Antontan’isa tamin’ny 2014